လာဘ်စားနေသည်ဟု နာမည်ကြီးနေသော ထိုင်းရှိ CI စခန်းများကို နှစ်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများ ဝင်စစ် ပ?? - Yangon Media Group
လာဘ်စားနေသည်ဟု နာမည်ကြီးနေသော ထိုင်းရှိ CI စခန်းများကို နှစ်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများ ဝင်စစ် ပ??
ပွဲစားများနှင့်ပေါင်းကာ လာဘ်စားနေသည်ဟုနာမည်ကြီးနေသော ထိုင်းရှိ မြန်မာလုပ်သားများအထောက်အထားထုတ်ပေးရာ CI စခန်းများသို့ နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတို့ဝင် ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်မှ ၇ ရက် အထိ ငါးရက်တာထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မဲဆောက်၊ မဟာချိုင်၊ ရနောင်း၊ ဆောင်ခလာနှင့် စမွတ်ပရာကန်တို့ရှိ မြန်မာနှင့် ထိုင်းအစိုးရတို့၏ အထောက်အထား ထုတ်ပေးရေး CI စခန်းများကို ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန(DOE)နှင့်ပူးပေါင်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ ပွဲစားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ကြောင်းသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်က အောက်တိုဘာ ၈ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
”ထိုင်းအလုပ်ရှင်က မြန်မြန် ပြီးချင်တဲ့အတွက် ပွဲစားကိုသုံးကြတယ်။ မဟာချိုင်(၁)က CI စခန်းကိုဝင်စစ်တော့ ပွဲစားတစ်ယောက် ဖမ်းခဲ့သေးတယ်။ ပြီးတော့ နောက် ပွဲစားကိုမိအောင်ဖမ်းဖို့ ထိုင်း DOE က DG ကိုတော့ပြောပြခဲ့တယ်။ ပွဲစားက ထိုင်းဘက်ဆို တော့ ထိုင်းပွဲစားများတာပဲ။ မြန်မာလူမျိုးပွဲစားက အဲဒီလောက်မရှိဘူး။ ပြီးတော့ ဝင်စစ်တော့ပွဲစားဆို တော့ ရှောင်တာပေါ့။ ဘယ်တွေ့မလဲ။ သူတို့ကလူလည်ပဲဟာ။ သို့ပေမယ့် အလုပ်သမားတွေဓာတ်ပုံရိုက်ထားလို့ အဲဒီဓာတ်ပုံကိုပြပြီးဖမ်းလို့ မိတာပါ”ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်ကပြောသည်။ ပွဲစားများရှိနေခြင်း၏ အဓိကအချက်မှာ ထိုင်းအလုပ်ရှင် များက မိမိလုပ်ငန်းမှလုပ်သား CI ပြုလုပ်မှုအမြန်ပြီးလိုသဖြင့် မြန်မာလုပ်သားများထံမှ အထောက်အထားပြုလုပ်ခငွေပိုမို ကောက်ခံကာ ထိုင်းပွဲစားများဖြင့် ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်း ကြောင့် ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း ပွဲစားများဖြင့်မပြုလုပ်ရန် ထိုင်း DOE မှတစ်ဆင့်ပြောဆိုခဲ့ ကြောင်း၊ ယင်းအပြင် အထောက် အထားပြုလုပ်ရာတွင်ဖြည့်စွက်ရသည့်ဖောင်များ၌ မြန်မာဘာသာ ဖြင့်ကိုးချက်သာပါဝင်ပြီး အင်္ဂလိပ်နှင့် ထိုင်းဘာသာများဖြင့်ဖြည့်စွက် ရကြောင်း၊ မြန်မာလုပ်သားအများစုမှာ တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည့်အပြင် မြန်မာဘာသာကိုပင်မဖြည့် စွက်နိုင်သည့်အခက်အခဲများ ကြောင့် ပွဲစားသုံးနေကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရကြောင်း ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်ကဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် အထောက်အထားပြုလုပ်ခ ကုန်ကျစရိတ်ငွေ ထိုင်းငွေ ဘတ်၂ဝဝဝ ခန့်ဟုသတ် မှတ်ထားသော်လည်း လုပ်သားများအမှန်တကယ်ကုန်ကျနေမှုမှာ ဘတ် ၃ဝဝဝ မှ ၁ဝဝဝဝ အထိရှိ ကြောင်း ထိုင်းရှိရွှေ့ပြောင်းလုပ် သားအဖွဲ့အစည်းများကဆိုထားသည်။ ”အပြင်ပွဲစားဆိုတာ CI စင်တာလုပ်ခွင့်ရတဲ့သူတွေက ခွင့်မ ပြုရင်လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက CI စင်တာထောင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင်ကပွဲစားပုံစံနဲ့မှ စင်တာထဲဝင် လုပ်ခွင့်ရမယ်။ တုံကင်လက်မှတ် တွေရောင်းစားနေတာက ပြဿနာစတာပဲ” ဟု မဟာချိုင်အခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအခွင့်အရေးကွန်ရက်(MWRN) အတွင်းရေး မှူးဦးစိန်ဌေးက ပြောသည်။ CI စခန်းများကို ဘန်ကောက်ရှိ အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံးမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ် ပြီး ပွဲစားများဖြင့်လုပ်ကိုင်မှသာ CI စခန်းအတွင်းသို့ဝင်ခွင့်ရရှိသည့်အတွက် မည်သို့ပင်လုပ်သား ကိုယ်တိုင်သွားရောက်သည်ဖြစ် စေ၊ လုပ်ကိုင်၍မရသည့်အခြေအနေ ဖြစ်နေကြောင်း၊ ယင်းအခြေအနေသည် ထိုင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် CI စခန်းအားလုံး၌ဖြစ်နေ ကြောင်း MWRN မှသိရသည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ထိုင်းအစိုးရ၏ပန်းရောင်ဘတ်ကတ် ခေါ် TR38 ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာအလုပ်သမားငါးသိန်းကျော်နှင့် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်မှစ၍ ထိုင်းအစိုးရထံစာရင်းပေးထားသည့် လုံးဝအထောက်အထားမရှိ သော မြန်မာလုပ်သားလေးသိန်းခွဲကျော်၊ စုစုပေါင်းမြန်မာလုပ်သား တစ်သန်းခန့်ကို CI ထုတ်ပေးနေ ခြင်းဖြစ်သည်။ CI ထုတ်ပေးမှုကို မတ်လ ၃ ရက်ကစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်၊ မဲဆောက်၊ ရနောင်း၊ ဆောင်ခလာ၊ စမွတ်ပရာကန်၊ ရနောင်းနှင့် ချင်းမိုင်တို့တွင် စခန်းကိုးခုဖွင့်ကာပြုလုပ်ပေး နေခြင်းဖြစ်သည်။ စတင်ပြုလုပ် ပေးသည့်နေ့ရက်မှ ခြောက်လအတွင်းတရားမဝင်မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားသုံးသိန်းခွဲကျော်ခန့်ကို CI ပြုလုပ်ပေးပြီးဖြစ်သည်။
ဂါနာတွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကား မီးလောင်ပေါက်ကွဲ၊ လေးဦးသေဆုံး
ပုဂံဒေသရှိ လောကနန္ဒာ စွယ်တော်မြတ် စေတီတော် စိန်ဖူးတော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်နှင့် ရွှေထီးတော် တင??
မာရှယ်ကို ဒဏ်ရိုက်ခဲ့ကြောင်း မော်ရင်ဟို အတည်ပြု
ရိုက်ကွင်းမှာ ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ မင်းသမီး ဘလိတ်လိုက်ဗလီး
ဇူလိုင်လအတွင်း ဧရာဝတီမြစ်ရေကြီး၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၌ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူ ၃ဝဝဝ ကျော်ရှိနေ ဟုဆို